🥇 ▷ macruufka 8 iyo "Hey Siri", aqoonsiga muusigga wuxuu ku yimaadaa Siri iyo inbadan ✅
macruufka 8 iyo “Hey Siri”, aqoonsiga muusigga wuxuu ku yimaadaa Siri iyo inbadan
Marka loo eego iOS 8, Siri wuxuu noqon doonaa kaaliyaha cod-bixiyaha ee ka sii fiican oo dhammaystiran
Waxaa muddo dheer la isla dhex marayay in Apple uu ka shaqeyn karo isdhaxgalka Siri iyo Shazam, iyada oo ujeedadu tahay in kaaliyaha codka codka Apple uu awoodo inuu aqoonsado heesaha aan dhageysaneyno ugu dambeyntiina ay natiijo ina siin doonaan. Hada tan iyo waxbadan, ka dib furaha ka dhacay Juun 2 ee WWDC14, waa run.
Siri wuxuu bilaabayaa inuu horumar la sameeyo horumarinno iyo horumarinno muhiim ah
Inta lagu gudajiray furahaani wuxuu ahaa Craig Federighi, qofka mas’uulka ka ah qeybta iOS iyo OS X ee Apple, mas’uulna ka ah tusidda iyo sharaxaadda adduunka astaamaha kala duwan ee lagu soo daray nidaamka cusub ee hawlgalka mobilada ee Apple, macruufka 8. Hadda. , ka dib markii ay ka tagtay nooca Beta, Siri wuxuu bilaabaa inuu ku daro sifooyin cusub oo xiisa leh iyo function function.
Horumarradaas waxaan ka dhex arki karnaa in nidaamka cod-bixinta qoraalka cod-bixinta la wanaajiyay, kaasoo hadda kuu oggolaanaya inaad fahanto oo ka jawaabto 22 luqadood oo cusub. Tani waxay ka dhigeysaa in adeeggu sii socdo oo adeegsado aad u tiro badan oo adeegsadayaasha iyo, waqti gaaban, oo caan ah.
Hadda, mid kale oo cusub oo lagu soo daray, oo uu weheliyo macruufka cusub ee cusub ee cusub ee ‘iOS 8’ oo ah kaaliyaha codka ah ee Apple Waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala muusikada jecel, iyada oo loo sii marayo iPhone iyo iPad, suurta galnimada in la waydiiyo muusikada ay ka dhageysanayaan ilo dibadeed oo ay noqdaan awood u leh inuu muujiyo natiijooyinka shaashadda iyo xitaa, natiijooyinka noocan oo kale ah, waxay siineysaa suurtagalnimada adeegsadaha inuu iibsado heesta ama album-ka iTunes. Waxaas oo dhami way suurtagal yihiin mahadnaqna la dhexgalka adeegga Shazam ee caanka ah.
Hadda waxaan si fudud u dhaqaajin karnaa Siri anagoo wacaya “Hey Siri” ama “Hey Siri”
Ugu dambeyntii, laga yaabee mid ka mid ah horumarinnada ugu muhiimsan ee lagu soo daray Apple In kaaliyaha codkaaga, waa shaqada lagu soo daray nidaamka qalliinka Android ee loo isticmaalo in lagu dhaqaajiyo Google Glass. Xaqiiqdii, Thanks to how this cusub, in iOS 8, dadka isticmaala aaladaha iOS (iPhone, iPad) waxay awood u yeelan doonaan inay dhaqaajiyaan kaaliyaha codka waqti kasta, iyagoo si fudud ugu yeeraya iyagoo leh “Hey Siri”, markii loo baahdo, natiijada waa in kaaliyaha Waxay bilaabi doontaa shaqada waxaanan ku weydiin karnaa waxa aan u baahanahay.
Xaqiiq ahaan cajiib, Isbaanish, marka aan dhaqaajineyno Siri annaga oo wacaya, amarka codka ee aan adeegsan doonno ma noqon doono «Hey siri»Waxaa loo adeegsaday Ingiriis, laakiin«Hey Siri«.
Muuqaalkan cusub wuxuu la mid yahay mid taariikhi hore oo la daabacay oo la yiraahdo OkSiri, kaas oo kuu oggolaanaya inaad adeegsato kaaliyaha codka adigoon taabsiin badhanka guriga si aad u dhaqaajiso. Wax macruufka ah oo iOS 8 uu ku sameyn doono asal ahaan.
Maxaad u maleynaysaa wararka ku saabsan Apple ee ku jira barnaamijka ‘Siri’ ee cusub ee iOS 8?